खतरनाक मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित ? | समाचार
July 1, 2021 NepstokLeaveaComment on खतरनाक मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित ?
मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित ?
काठमाडौ । खतरनाक मानिएको काला ढुंसीका संक्रमित नेपालमा पनि बढ्दै गएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म २६ जनामा यो संक्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकाहरुको मात्र संख्या हो यो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै १३ जना कालो ढुसीका बिरामी उपचारका लागि भर्ना भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । भर्ना भएका मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । समयमै अस्पतालमा नपुग्दा धेरैजना बिरामीमा जटिलता हुनसक्ने र आँखा नै नदेख्ने हुने गरेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
कालो ढुसी भएका १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दुईजनाको आँखा निकालिएको छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जामा उपचार गराएका दुई जनाको आँखा निकालिएको हो । जसमध्य एक जना नेपालगन्जका र अर्का विरगञ्जका हुन् । आँखा निकालिएकामा एक जना महिला र पुरुष छन् । उनीहरुको एउटा एउटा आँखा निकालिएको हो । कालो ढुसीका बिरामीलाई दिइने एम्फोटेरिसिन बी नामको औषधिको अहिले अभाव देखिएको छ ।
ए म्फो टेरिसिन बीलाई भारतले निर्यात प्रतिबन्धित औषधिको सूचीमा राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालो ढुसीका बिरामीका लागि भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग ३ हजार भाइल पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर, सहजरुपमा उपलब्ध नभएको भन्दै डब्लुएचओले जवाफ दिएको छ ।
तनहुँमा सवारी दुर्घटनाबाट परी ३७ पुरुष र आठ महिलासहित तीन बालकको मृ,त्यु